ရန်ကုန်-ပုသိမ်ကားလမ်းပေါ်က သမုဒ္ဒယစားသောက်ဆိုင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Other - Non Channelized » ရန်ကုန်-ပုသိမ်ကားလမ်းပေါ်က သမုဒ္ဒယစားသောက်ဆိုင်
Posted by etone on May 8, 2010 in Other - Non Channelized | 18 comments
ခရီးသွားရင်းတွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့ အဖြစ်အပျက်လေးတခုကိုသူငယ်ချင်းအားလုံးနဲ့ share လုပ်လိုက်ပါတယ်နော် ။ သူငယ်ချင်းတို့တွေလည်း ခရီးသွားရင်း အလားတူအဆင်မပြေမှူလေးများမကြုံရအောင် တတ်နိုင်သရွှေ့ forwardပြန်လုပ်ပေးကြပေါ့နော် ။
ပြီးခဲ့တဲ့ တပတ်က ကျွန်မတို့အုပ်စုလိုက် ချောင်းသာကိုသွားလည်ခဲ့ကြတယ်။အစစအရာရာ အဆင်ပြေခဲ့ပေမဲ့ လမ်းခုလတ်မှာဝင်နားခဲ့တဲ့ စားသောက်ဆိုင် နှစ်ခုနဲ့ပတ်သတ်လို့ အတော်လေးစိတ်ကသိကအောက်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။
ပထမဆုံးကျွန်မပြောချင်တဲ့ စားသောက်ဆိုင်ကတော့ ရန်ကုန်ပုသိမ် ကားလမ်းပေါ်မှာရှိပါတယ် ။ ဗိုလ်မြတ်ထွန်း တံတား အကျော်လေး မှာပေါ့ ။ ခရီးသွားကားများအများဆုံးရပ်နားတဲ့နေရာပါပဲ ။ ခနတဖြုတ် အဆာပြေစားဖို့နဲ့ အပေါ့ပါးသွားဖို့ ကားရပ်ပေးတဲ့နေရာပါ ။ ဆိုင်ရဲ့နာမည်ကတော့ သမုဒ္ဒယလို့ ရေးထားပါတယ် ။ အပြင်အဆင်လေးနေရာထိုင်ခင်းကိုတော့ အဆင်ပြေအောင်ကျယ်ကျယ် ၀န်းဝန်းလုပ်ပေးထားပါတယ်။ တခြားခရီးသွားကားများရပ်နားနေချိန်နဲ့ ကြုံခဲ့တာမို့ အဆင်ပြေပြေမှာစားလို့ရတဲ့ ကြာဇံချက်တပွဲကိုပဲ ကွန်မမှာစားခဲ့တယ် ။ စားပွဲထိုးသုံးယောက် ပြောင်းပြီး ခေါ်မေးပြီး နောက်မှာ ကျွန်မရှေ့ကို ကြာဇံချက်တစ်ပွဲရောက်လာပါတော့တယ် ။ ( စားပွဲထိုးတွေက မှာချင်တာမှာခိုင်းပြီး ဘာမှမရောက်လာနိုင်လို့ တယောက်ပြီးတယောက်ကို remind လုပ်ရတယ်လို့ ဆိုလိုတာပါ )။ ရောက်လာတဲ့ ကြာဇံချက်ပွဲအပြင်အဆင်ကနည်းနည်းတော့ထူးဆန်းနေပါတယ် ။ ပုံဖော်ပြီးမြင်အောင် ပြောပြရရင် ကြေးအိုးပန်းကန်အလတ်စား ထဲမှာ တစ်ဝက်သာသာလောက်ပဲ ရှိတဲ့ကြာဇံချက်ကို ထည့်ပြီး အောက်က ပလတ်စတစ် ပန်ကန်ခံလို့ ၀ါးတူတစုံကို ပါးကန်ပေါ်ကနေတင်ထားတဲ့ အနေထားမျိုးပါ ။စတီးဇွန်းတချောင်းလည်း ထည့်ပေးထားပါတယ်။ ပန်းကန်လုံးထဲမှာပါတဲ့ ကြာဇံချက်ပမာဏနဲ့ ပန်းကန်လုံးနေကိုမြင်ရတာ အတော်လေးထော်လော်ကန်ကလန့်နိုင်နေပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့လည်း ကျွန်မစားချင်တာ ပန်းကန်လုံးမှမဟုတ်ပဲလေ … အထဲက ကြာဇံချက်အရသာကိုသာမြည်းဖို့ ဇွန်းနဲ့ ပန်းကန်လုံးထဲကိုမွှေလိုက်တော့မြင်လိုက်ရတာက ပဲပြားတုန်းကြီး သုံးတုန်းပါ ။ အထူးဆန်းကတော့ဖြစ်ပြီးရင်းဖြစ်နေပါပြီ ။ ကျွန်မတို့စားခဲ့ဖူးတဲ့ ကြာဇံချက်ထဲမှာ ဘယ်တုန်းကမှ ပဲပြားတုံးတွေ ထည့်မချက်ခဲ့ပါဘူး ။ တခါတခါ ငါးဖယ်အစားပဲပြားလေးတွေနဲ့ အသားတုလေးတွေ နှုတ်နှုတ်ဆင်းပြီး ချက်တာတော့တွေ့ ဖူးခဲ့ပါတယ် ။ အခုပဲပြားတုံးက သုံးမြှောင့်ပုံလှီးထားပါတယ် ။ ဈေးက ပဲပြားလေးထောင့်ပုံကို နှစ်လွှာခွဲပြီး ထက်ခြမ်းခြမ်းထားတဲ့ပုံမျိုးပါ ။ ဈေးထဲက ပဲပြားတစ်တုံးကိုလှီးရင်ကျွန်မပန်းကန်လုံးထဲက ပဲပြားလေးတုံးစာရပါတယ်။ ပဲပြားကတော့ကျွန်မကြိုက်လို့ ဇွန်းနဲ့ပန်းကန်လုံး ထဲဆက်မွှေပြီး ကြာဇံလေး ၊ မှိုခြောက် ၊ ပန်းခြောက်နဲ့ အသာလေးတွေပဲခပ်စားဖို့ရှာပါတယ် ။ အသားနဲ့တူတာဆိုလို့ ဘာမှမပါတဲ့အပြင် ကြာဇံလေး လေးငါးမျှင်နဲ့ မှိုခြောက်ပန်းခြောက်အတုံး အထစ်လေးနည်းနည်းသာပါတာကိုတွေ့ရပြန်တယ် ။ နေရာဒေသကွာလို့ ချက်တဲ့နည်းမတူတဲ့သဘောလားတော့ ကျွန်မမပြောတတ်ပါဘူး အတော်လေးထူးဆန်းတာတော့အမှန်ပါပဲလေ။ ဒီလိုနဲ့ပဲ အချိန်သိပ်မရခဲ့ တာကြောင့် ကြာဇံချက်ကိုမြန်မြန်စားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ ပထမဆုံးဟင်းရည်ကို မြည်းကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ ချဉ်ချဉ်စပ်စပ်အရသာ ကိုရပြန်ပါတယ် ။ ငါးခေါင်းဟင်းကို မန်ကျည်းသီးမှည့်နဲ့ ရေကျိုချက်တဲ့အရသာမျိုးပါ ။ ငရုပ်ကောင်းမွှေးမွှေးလေးနဲ့ စားလို့ကောင်းတဲ့ ရန်ကုန်က ကြာဇံချက်နဲ့တော့ အရသာအရမ်းကိုကွာပါတယ် ။ ချေးများနေလို့မဖြစ်တဲ့အနေထားကြောင့် အစာပြေသုံး လေးဇွန်းပဲစားခဲ့ပါ တယ်။ ပြီးတော့ကော်ဖီတစ်ခွက်မှာသောက်ပြန်ပါတယ် ။ ကော်ဖီကတော့မြန်ပါတယ် တခြားစားပွဲကမှာထားတာမယူတော့လို့ လာချပေးတာကြောင့်ပါ ကျွန်မက ကော်ဖီကို အမှုန့်နဲ့ စစ်ပြီးဖျော်တဲ့ ဆိုင်ဖျော်ပုံစံမျိုးပဲကြိုက်တာပါ ။ လာချပေးတဲ့ကော်ဖီက အေးနေပါပြီ ။ ကော်ဖီလို့ပြောပြီး သောက်ခဲ့ရတာက အရောင်ဖျော့ဖျော့နဲ့ ခပ်ကျဲကျဲ ကော်ဖီတစ်ခွက်ပါပဲ ။ အားလုံးစားသောက်ပြီးလို့ ပိုက်ဆံရှင်းချိန်မှာတော့ အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ကို ကြာဇံချက်ဈေးက ထူးဆန်းနေပြန်ပါတယ် ။ တစ်ပွဲကို ၁၈၀၀ တဲ့လေ။ နားကြားများမှားသလားပြန်မေးတော့လည်း ဒီဈေးပါပဲ။ အောင့်သီးအောင့်သက်နဲ့ ပိုက်ဆံရှင်းခဲ့ပြီး ကိုယ့်လိုပဲ ခြားသူငယ်ချင်းတွေလည်း ဒီအဖြစ်မျိုးမကြုံရအောင် ဆိုင်နာမည်ဆိုင်းဘုတ်ကိုပါ ဓါတ်ပုံရိုက်ခဲ့တယ်လေ။ ပုသိမ်ဘက်ကိုသွားတဲ့ခရီးသွားကားတိုင်းလိုလိုရပ်တဲ့နေရာပါ။
ကြိုက်တယ်ကွာ အဲဒီလို တာဝန်မဲ့ လောဘသားတွေကို
အဲဒီလို ဗြောင်ကြီး ရေးလုပ်တာ ဖတ်ရတဲ့သူ အရသာတွေ့သွားတာဘဲ
သမုဒ္ဒယစားသောက်ဆိုင် စားသောက်ဆိုင်နော် အသေ မှတ်ထားပြီး
တွေတဲ့သူတိုင်း အခမဲ့ပြောပေးပါ့မယ် သမုဒ္ဒယစားသောက်ဆိုင်
ဆိုင်တွေ က လုပ်ချင်သလို လုပ်နေကြတာပါ။
ကြာဇံချက်တစ်ပွဲ ၁၈၀၀ ဆိုတော့ ဆိုင်ရှင် ကို ပါးခေါ်ရိုက်လို့ ရနေပြီ။
အမှန်တော့ အဲသလို ပုံစံမမှန်ဘူးထင်ရင် အစကတည်းက ပြန်ပေးလိုက်ပါ။
ရှိသေးတယ် ပွင့်ဖြူ ဆိုတဲ့ သုဝဏ္ဏ က ဆိုင် ကတော့ ကော်ရည်ခေါက်ဆွဲ တစ်ပွဲ ၂၂၀၀ တဲ့။ ကောင်းကြသေးလား…
ခရီးသွား ရာသီဖြစ်တဲ့အတွက် ကမ်းခြေကို အများဆုံး သွားဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်… ။ မေ့နေမှာဆိုလို့ မန်းထားတာလေးတစ်ခုနဲ့ recovery လုပ်ထားတာပါ … ရှောင်ကွင်းသွားနိုင်အောင်ပါ ။
ကိုယ်မရောက်ဖူးတဲ့ ဆိုင်ဆိုရင် ဈေးအရင်မေးပြီးမှမှာတာ အကောင်းဆုံးပဲ။ ဂွတီး ဂွကျနဲနဲနိုင်ပေမဲ့ ဒီလိုဟာမျိုးမကြုံရတော့ဘူးပေါ့…….။
ကျနော်ကတော့ ခရီးသွားတယ်ဆိုရင် သိပ်ထူးထူးဆန်းဆန်းမစားဘူး။
ကြုံနေလို့ ပြောရအုံးမယ်။ ချောင်းသာ၊ ငွေဆောင်ဖက်သွားရင် ပန်းတနော်မြို့ဆိုင်းဘုတ်တွေ့ရင် အဲဒီနားမှာ ယူရေးနပ်စ် လ္ဘက်ရည်ဆိုင် ဆိုတာရှိတယ်။ လိပ်စာက တံတားလမ်း၊ တံတားထိပ်၊ ပန်းတနော်မြို့တဲ့။ ၀င်စားကြည့်ပါ။ ကိုယ့်မြို့မို့လို့ပြောတာ မဟုတ်ဘူး။ စားလို့ကောင်းတယ်။ သန့်ပြန့်တယ်။ ဈေးနှုံးသင့်တင့်တယ်။ ညွှန်လိုက်တဲ့လူတိုင်းကတော့ သဘောကျတယ်လို့ ပြန်ပြောကြတာပဲ။ ကိုယ်တိုင်သွားစားကြည့်ပြီး ပို့စ်ထပ်တင်ပေ့ါ။
သန့်ရှင်းမှုလည်းမရှိပါဘူး ….သူတို့တွေကတနပ်စားကြံပြီး လုပ်စားကြတာများပါတယ်…ခရီးဝေးသွားတော့မယ်ဆိုရင် အိမ်မှာတည်းကလမ်းမှာအဆာပြေစားနိုင်အောင်ပြင်ဆင်ယူသွားတာပဲကောင်းပါတယ်…..ပြည်ဘက်သွားတဲ့လမ်း မှာ ဆို မင်းလှ ဆိုတဲ့မြို့လေးမှာ ကားကြီးတွေနားလေ့ရှိပါတယ်..ဆိုင်နာမည်တော့မပြောတော့ပါဘူး ကြီးကြီးမားမားသူတစ်ဆိုင်ပဲလမ်းဘေးမှာရှိတာပါ..အဆောက်အဦးကတော့သုံးထပ်တိုက်ကြီးပါပဲ..ဒါပေမဲ့ ဆိုင်တွင်းအပြင်အဆင်ရော နောက်ဖေးနောက်ဖီသွားဖို့ ရေအိမ်တွေကစ သိပ်ညစ်ပတ်တာပါပဲ..ဘယ်နေရာကိုမှမထိချင်လောက်အောင် ညစ်ပတ်တာပါ…အစားအသောက်ကလည်း ညံ့ပြီး ဈေးလည်းမတန်တဆပေးရတာပါ…ရန်ကုန် မန်းလေး လမ်းသစ်ကသွားရင် ကားတွေနားတဲ့ ဖြူး ၁၁၅ မိုင် ထင်ပါရဲ့..အဲဒီ မှာရှိတဲ့ စားသောက်ဆိုင်တွေကတော့ တော်တော်လေး အဆင်ပြေပါတယ်.. သန့်ရှင်းတယ်..ဆက်ဆံရေးကောင်းတယ်..အစားအသောက်တွေလည်းကောင်းပြီးဈေးလည်းသင့်ပါတယ်…မြ်ို့ပေါ်စားသောက်ဆိုင်တွေနဲ့ဈေးနှုန်းကိုယှဉ်လို့မရတောင်မှ နဲနဲပါးပါးပဲဈေးကွာတာပါ….စားပျော်ပါတယ်..ခရီးလမ်းကိုမှန်းပြီး စားဖို့သောက်ဖို့တခါတည်းပြင်ဆင်ပြီးယူသွားတာအကောင်းဆုံးပါပဲ…ခရီးသွားရင် ကျန်းမာရေးကိုအထူးဂရုစိုက်ရတော့ အစားအသောက်သန့်ဖို့လည်းအရေးကြီးပါတယ်..
ကားလမ်းဘေးဈေးဆိုင်တွေက ကားသမားများကိုသာ အလကားကျွေးကြတယ်။ ခရီးသည်များကိုတော့ ရိုက်စားလုပ်တတ်ကြပါတယ်။
လောဘ ကြီးတဲ့ ဆိုင်တွေအကြောင်း ပြည်သူလူထုသိအောင် သတင်းပေးရမယ် ။
တစ်ချို့ ခရီးသွားတွေက အပျော်ခရီးမဟုတ်ပဲ မဖြစ်မနေသွားရတဲ့အတွက် ငွေကြေးတစုံတစ်ရာ ပြသနာရှိနိုင်တဲ့ အတွက် ရှောင်သွားလုိ့ ရအောင်ပါ ။
ပုသိမ်မြို့ပေါ်ကဆိုင်တွေလဲ ဈေးသာကြီးတာ မကောင်းတော့ပါဘူး.
ချောင်းသာသွားရင်း ထမင်းစားချင်ရင်တော့ တက္ကသိုလ်ကျောင်းလမ်းကဆိုင်တွေမှာစားပါ ဈေးလဲသက်သာပါတယ်
ကျွန်တော်ကတော့ ဒီနေ. မနက်ပဲ ပဲပြုတ်ဆီစမ်းကို တစ်ပွဲ 800 နဲ. စားခဲ့၇တယ် ကြက်ဥပါပြီးမှားတွက်မိတာလားလို. မေးမိတာ ဟုတ်ဘူးဗျ တစ်ပွဲ 800 တည်း( ဟေဟေး ) တစ်ခါစားတွေ.ပါ တော်တော် ကုသိုလ်ရမယ် သူတွေ.
အဲ ကားသမားတွေ.ကြတော့ သေချာ ရှယ်ကျွေးတာနော် ဒါမျိုးကြတော့ ဘယ်အမတ်မင်းကို သွားလျှောက်ကမလည်းဗျို…..
အဲဒလို ဆိုင်မျိုး တွေအကြောင်းပြောနေရင်..။ ဘာမှတောင်လုပ်ရမှာမဟုတ်ဘူး..။ ဒီတော့ အဲဒိလိုလမ်းဘေးဆိုင်တွေ (ထိုင်နေကြမဟုတ် တဲ့ ဆိုင်တွေ ၀င်မထိုင်ပဲ နေလိုက်ကြပေါ့……..။ )အများညီရင် ဤ တောင်ကျွဲဖြစ်သေးတာ……………
သူတို့တွေ ဘာခံနိုင်မှာလဲ…။ ကျွန်တော်ကတော့ တွေ့တဲ့သူအဲဒိလိုပဲပြောတယ်..။ ခုကထဲကစည်းရုံးရေးဆင်းနေတာ အရွေးခံဖို့………..
ဘယ်ဆိုင်မဆို စားတော့မယ်ဆိုရင် ဘယ်ဟာဘယ်ဈေးလဲ မေးပြီးမှ စားတဲ့အကျင့်ကို လုပ်ကြည့်ပါ။ မစားခင်မေးရင် ဈေးတွေက အဲဒီလောက် မများတော့ဘူး။ ဒါ့အပြင် စားသောက်ပြီးရင် ဘယ်လောက်ကျလဲ ကိုယ်တိုင်လိုက်တွက်ပြီးမှ ပေးပါ။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ခရီးသွားတာ အဲဒီနည်းနဲ့ သွားလိုက်တာ သိသိသာသာကို ကုန်ကျစရိတ် သက်သာသွားပါတယ်။
MaMa ရေ အဲ့ဒီလို မစားခင်မေးတာတော့ ကောင်းပေမဲ့ … ပတ်ဝန်းကျင်ကလေ ကပ်စီးနဲဆိုတဲ့ ဘွဲ့ ပေးပြန်တယ် … ။ စားပြီးရှင်းလျှင်တော့ ဘယ်လောက်ကျလဲ တွက်ပြီးမှပဲ ပေးပါတယ် … ။
Shar Thet Man (73800 Kyats )